नेपाल इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, २४ पुस २०७५)
यस कम्पनीले पूँजीवृद्धिका लागि ६५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ । मङ्सिर ५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा हकप्रद स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको कम्पनीले स्वीकृति पश्चात् ४० लाख १४ हजार ६ सय ५१ दशमलव ५८ कित्ता शेयर जारी गर्नेछ । हाल रू. ६१ करोड ७६ लाख ३९ हजार पूँजी रू. १ अर्ब १ करोड ९१ लाख ५८ हजार पुग्नेछ । हकप्रद स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहँदै गर्दा दोस्रो बजारमा विगत ४ दिनदेखि कारोबार रकममा भने कमी आइरहेको छ । कम्पनीको १ वर्षको कारोबार अवस्थालाई हेर्दा उच्च मूल्य रू. १ हजार ४ सय १० र न्यून मूल्य रू. ४ सय ६५ रहेको छ । सोमवार कम्पनीको अन्तिम मूल्य रू. ५ सय ६१ कायम भएको छ ।
खरीद चाप : कम्पनीको सोमवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्म विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप बढी छ । यस अवधिसम्म ६ हजार ३ सय ५६ कित्ता शेयर खरीद र १ हजार ५ सय ९६ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
2019-01-08 - 132 view(s) - abhiyan